Homeliness, स्नान वा शवर
रूसी स्नान छैन मात्र सफा गर्न, तर पनि स्वास्थ्य सुधार। र त यो यसको न्यानोपन खुसी र एक दशक भन्दा बढी सेवा, निर्माण को एक पाहुना को एक विचार गर्न आवश्यक छ को स्नान मा स्टोभ स्थापना गर्न कसरी। आखिर, यो यसको गुणस्तर गरेर, गर्मी स्रोत र प्रकार न्यानो र आरामदायक जोडी, तर पनि मालिक र आफ्नो मित्र / अतिथि को मूड कसरी मात्र हुन निर्भर गर्दछ।
कसरी आफ्नो हातमा एक स्नान लागि दन्किरहेको निर्माण गर्न
को भाप को यो धेरै महत्त्वपूर्ण भाग बिना वर्तमान बाफ छ। सना मा स्टोभ स्थापना गर्न कसरी अघि, तपाईं काम सुरु गर्नु अघि सबै विचार गर्नुपर्छ। पहिलो चरण मोडेल परिभाषित छ। आगोको भट्टी अग्रिम त्यसपछि यसलाई अन्तर्गत ईटा संग लाइन छ भने जग गरिन्छ। धातु भने, यो अन्तर्गत जग आवश्यक छैन। को पाठ्यक्रम, तपाईं समाप्त परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ को स्नान को भित्री, तर यस्तो नवाचारै अब लिन र थप स्रोतहरू आवश्यक हुनेछ। र यो धेरै गाह्रो हुनेछ।
आगोको भट्टी मा धातु स्नान खरिद गरेर, तिनीहरूलाई स्थापना लागि निर्देशनहरू पढ्नुहोस् महत्त्वपूर्ण छ। र तपाईं स्टोभ स्वामित्व भने, तपाईं निर्माण कार्यहरू विविधता प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।
स्थापनाको लागि नियमहरु
जब भट्टीमा स्थापना सामान्य नियम र उचित संचालन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक नियमहरु पालन गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम आगोको भट्टी 1.5 मीटर को क्षेत्र मा bystrovosplamenyayuschihsya सामाग्री, र चिम्नी हुनुपर्दछ छ - विशेष छत र पारित छत मा प्रबन्ध मार्फत फिर्ता लिया। काठ संरचना चिम्नी र्याप इस्पात पानाको ज्वलन बच्न। स्पेस को छवि राख्नु इन्सुलेशन - माटोको वा basalt ऊन।
को चिम्नी लागि तयार बनाएको सैंडविच निर्माण पनि छन्। तिनीहरूले incombustible इन्सुलेट सामाग्री राखिएको छ जो बीच फरक diameters, दुई पाइप प्रतिनिधित्व गर्छ। तर चिम्नी एक समाप्त उत्पादन बढी महंगा हुनेछ।
आगोको भट्टी लागि जग
सना मा स्टोभ स्थापना गर्नु अघि, तपाईं गैर-दहनशील सतह सुसज्जित गर्न आवश्यक छ। निर्माण गर्न थप विश्वसनीय र सुरक्षित थियो, यसको स्थापना एक तयार आधार बनेको मा गरिन्छ chamotte ईटा वा ठोस। को स्नान मा भट्टीमा लागि जग बिल्कुल चिल्लो र टिकाउ हुन अनिवार्य छ। अक्सर, को स्नान मा काठ को फर्श - र त्यसपछि तिनीहरूले आगो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एक इस्पात पाना फिट। यसको मूल्य ओवन 50% को आकार भन्दा बढी पर्छ। को स्ट्याक इस्पात अभ्रक पाना वा टाइल को शीर्ष मा। पनि इस्पात बनेको सुरक्षा स्क्रीन अवस्थित र हो, खण्ड 0.8 हेर्नुहोस्।
सबैभन्दा अक्सर स्नान गर्न या त काठ ओवन, वा कोइला बाल्न हुनेछ जो ती माउन्ट। यस मामला मा, ढोका अघि व्यवस्था गर्न कोइला आगो छ देखि एक धातु प्याड, अपेक्षाकृत ठूलो हुनुपर्छ जो गल्ति खसेको गर्न। यो पनि आगोको भट्टी noncombustible सामाग्री वरिपरि स्पेस ढाल सिफारिस गरिएको छ। पर्खाल पाना इस्पात र अछूता बनेको स्क्रीन द्वारा सुरक्षित को लग इन गर्नुहोस्।
कि धातु को फाइदा छिटो ईटा माथि heats। फलस्वरूप, इन्धन कम गर्न आवश्यक हुनेछ। किनभने यो माउन्ट पर्याप्त सजिलो छ यो चुलो राम्रो छ, र मूल्य सबैलाई सुलभ छ। धातु भट्टीमा अनुकूल बनाइएको आदेश गर्न सकिन्छ र खरिद गर्न सकिन्छ र कारखाना उत्पादन।
यसलाई चाँडै ठंडा फायर को समाप्ति पछि - यो डिजाइन एक महत्वपूर्ण drawback छ।
ईटा हीटर सबैभन्दा व्यावहारिक embodiment छ, तर महंगा र समय खपत। भट्टीमा यस प्रकारको यो स्थायी रूपमा राखेर, अझ कोमल गर्मी दिन्छ। एक स्टोभ को लाभ को - यसको सुरक्षा, बल्न को कुनै जोखिम देखि। तर लाभ संग यो एक drawback छ। यो डिजाइन धेरै बिस्तारै गरम छ। यस सन्दर्भमा, यो इन्धन को एक ठूलो रकम आवश्यक छ।
सिद्धान्तहरू ईटा चिनाई फर्नेस
को स्नान मा स्टोभ स्थापना अघि, खातामा केही महत्त्वपूर्ण nuances लिन आवश्यक छ। को poryadovkoy ईटा नोट - यो ध्यानपूर्वक बाहिर छ। स्टोभ एक ठूलो आकार राखिएको छ भने, र आफ्नो शक्ति पर्याप्त उच्च छ।
विशेष ध्यान लागि समाधान भुक्तान छ चिनाई ओवन। यो भिजेको र यो एक जबकि लागि खडा गरौं जो अग्रिम माटोलाई, विशेष प्रविधिले kneaded छ।
आफ्नो हातमा एक स्नान मा चिनाई ईटा ओवन को मान्यता र आवश्यकताहरु नियालेर छन्। बलियो डिजाइन प्राप्त गर्न, यो एक स्तर प्रयोग गरेर कुना र पङ्क्तिहरू पंक्तिबद्ध आवश्यक छ। यो पोस्ट गरिनेछ रूपमा तेस्रो पङ्क्तिले खरानी ढोका समावेश गर्न सुरु गर्नुहोस्। skewing बच्नको लागि, तिनीहरूले तार मुड हुनुपर्छ र यो अवस्थामा काम को अन्त सम्म रहन।
चौथो पङ्क्ति को बिछाउने बेला खरानी पिट मा खरानी खन्याउन हुनेछ जो मार्फत अंगीठी लागि खोक्रो बनाएको छ। चिनाई आगोको भट्टी गर्न माउन्ट च्यानलहरूमा स्थापित छ जो ट्यांक, को स्थापना को लागि इच्छित उचाइ गर्न सञ्चालन गरिएको छ। बाहिर बाल्न छैन लामो समय को लागि ट्यांक गर्न, यो अभ्रक समाप्त गर्न सकिन्छ।
चिनाई कि स्तरमा प्रदर्शन यो सबै पक्ष बाट ट्यांक बंद सम्म। आगोको भट्टी को ढोका बारे मा भूल छैन। इँटा को बीस-तेस्रो गर्न चिनाई नेतृत्व। पाइप उचाल्न शुरू गरे पछि। एक बिछाउने पाइप आधा-ईटा मा बाहिर छ। यसको उचाइ छत को उचाइ मा निर्भर गर्दछ, तर यो छत स्तर माथि 1.5 मीटर हुनुपर्छ।
तत्व बीच seams पालना गर्न आवश्यकता ओवन विशेष ध्यान संग, ईटा बनेको व्यवस्था। आफ्नो मोटाइ5भन्दा कम मिमी हुनुपर्छ। जोडहरुको राम्ररी तिनीहरूलाई मार्फत धुवाँ को रिसाव बच्न समाधान संग छाप हुनुपर्छ।
महत्वपूर्ण आफ्नो हात संग स्नान मा भट्टीमा स्थापना गर्दा - गल्ती नगर्न र राम्ररी डिजाइन चढाउनुहोस्। यो गर्न, गणना बनाउन र हीटर लेआउट आकर्षित। पूर्व-गरे चिम्नी देखि उत्पादन - तपाईं सिर्जना गर्दा रेखाचित्र धेरै भट्टीमा पर्खाल बाट एक मीटर को दूरी मा स्थित हुनुपर्छ, र पाइप सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
पसलहरूमा को समतल माउन्ट र आगोको भट्टी बाट 1.5 मिटर दूरी मा अवलोकन गर्दा। यसको ढोका को स्नान को कुना हुनुपर्छ। र पनि राम्रो लाउने कोठा मा भट्टीमा व्यवस्था गर्ने।
निर्माण महिनामा स्नान भट्टीमा कसरी स्थापना गर्न थुप्रै प्रश्न, छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम स्टोभ अन्तर्गत आधार, राम्रो छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प भएको बिछाउने जग समयमा साइट तयार छ। यो के गर्न छुट्टै क्षेत्र विशेष आगोको भट्टी भविष्य को आकार खातामा लिएर भर्नुहोस्। यो मंच हीटर लागि आधार हुनेछ।
स्थापना धातु भट्टीमा
धातु भट्टीमा, यो मुनि जग को कमी माउन्ट भने - यो समस्या छ। उत्पादन वजन सामान्यतया साना, त्यसैले यसलाई सम्भव इस्पात पाना, इँटा र को तल्ला मा अडान निर्माण गर्न छ को आगो रोक थाली।
आधार प्लेट मा संग स्क्रू तल्ला संलग्न छ। यो एक समाधान संग एक ईटा राख्छ। समाधान सुकेको छ पछि, टास्ने विशेष इस्पात पानामा संलग्न छ। दुई दिन मिश्रण सुक्खा पूरा गर्न पूर्व प्रतीक्षा र मात्र पछि उत्पादन स्थापना गर्न आवश्यक छ।
ओवन स्थापना भएको छ भने, काम सुरु गर्नु अघि, तपाईं आफ्नो नियम पालना राम्ररी निर्देशनहरू पढ्नुहोस् र कडाई गर्नुपर्छ, निर्माता द्वारा पूर्वनिर्मित। यदि डिजाइन व्यक्तिगत आदेश गरेको थियो, यो भट्टीमा मास्टर देखि सल्लाह खोज्न आवश्यक छ।
आधार तयार भएपछि, तपाईं ओवन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। को अडान को आयाम स्टोभ को मापदण्डहरु गर्न कडाई यकिन गर्नुपर्छ। यो भट्टीमा को प्रवेश ढोका गर्न स्थित गर्नुपर्छ। धेरै नै भट्टीमा को भाप कोठा को कुना मा हुनुपर्छ।
माउन्ट पाइप र चिम्नी
आगोको भट्टी को स्थापना पछि अर्को चरण चिम्नी पाइप को व्यवस्था र स्थापना हो।
भवन बढी सौंदर्य उपस्थिति लागि आजको निर्माण उद्योग मा, धेरै वर्ग chimneys प्रयोग गर्न थाले। तर यस्तो डिजाइन को soot छिटो को कुना मा रहेको छ रूपमा, र यो प्रायः साफ हुनेछ, व्यावहारिक छैन।
स्टेनलेस स्टील को बनाइएको ट्यूब छ कि एक - स्नान गर्न उचित भट्टीमा। यो राउन्ड हुनुपर्छ गठन। क्रूसमा खण्ड ट्यूब चुलो मा खोल्ने को व्यास मेल हुनुपर्छ। यसको न्यूनतम लम्बाइ5मीटर हुनुपर्छ।
अक्सर उच्च अन्त मा स्नान ताप पानी को लागि बयलर स्थापना गर्नुहोस्। तिनीहरूले इकट्ठा गर्न सजिलो, र बिजुली उपकरणबाट खुवाइन्छ। बयलर कहीं राखिएको गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, यो विकल्प एक स्नान सबै संचार जोडिएको छ घटनाको सबै भन्दा राम्रो छ, र पनि संरचना को आकार दिन्छ।
तर अवस्था उपलब्ध छैन भने? एक स्नान टब मा ओवन व्यवस्था गर्न - जब तपाईं पानी हीटर प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यसपछि त्यहाँ एक वैकल्पिक छ। यो डिजाइन को गोलीबारी भट्टीमा समयमा पानी गर्मी गर्न अनुमति दिन्छ।
ट्यांक नजिकै वा स्टोभ माथि सेट। यो विकल्प छैन बिजुली को अभाव मा सबै भन्दा राम्रो हुनेछ, तर पनि सानो आकार को संरचना भने।
दुर्लभ अवस्थामा मा, स्नान गर्न ट्यांक भट्टीमा सीधा सीधा स्टोभ मा स्थापित छ। तर यो यस्तो संरचना चिसो ट्यूब योगदान देखि, सबै भन्दा राम्रो विकल्प छैन, र यो कठिन भट्टीमा पगाल्न बनाउँछ। कन्टेनर र उपखाडी पाइप संग सम्पर्क छ भने, त्यसपछि यो उत्पादन condensate - र चिम्नी फलस्वरूप चाँडै soot र कार्बन कालो सँग भरिएको।
त्यहाँ केही बुँदा, जो अन्तर्गत कोठा धेरै वर्ष को लागि पछिल्लो र आफ्नो न्यानोपन र सान्त्वना संग मालिक खुसी हुनेछ छन्।
पहिले, माथि एउटा पूरक, यो कडाई सुरक्षा सावधानीहरु पालन गर्न उचित हुन सक्छ। यो आगोको कारण अक्सर स्नान भट्टीमा छ कि समाचार छैन। र मूलतः आगो को काठ संरचना जो मार्फत चिम्नी संग सम्पर्क अंक मा सुरु हुन्छ।
को स्नान एक बिजुली भट्टीमा स्थापना गर्न योजना छ भने, यो पनि र बिजुली सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, ताराहरु ध्यान सबै उपकरणहरू शक्ति संक्षेप द्वारा गणना।
सानो आकार को जोडी, र यो एक धातु चुलो हुँदा, बल्न को एक जोखिम छ। यस मामला मा आफ्नो ईटा आयातित वा विभाजन-जस्तो स्क्रिन छ राम्रो छ।
स्नान स्क्रीन: कार्यक्षमता र सजावट
हट टब जक्यूजी: चयन कसरी गर्ने?
एक स्वच्छ शवर छनौट
को ख्रुश्चेव मा बाथरूम डिजाइन। एक पाँच-मंजिल्ला घर मा एउटा सानो बाथरूम डिजाइन (फोटो)
शवर होल्डर पर्खाल - बाथरूम सान्त्वना
अर्को महसुल "मेगाफन" स्विच र कसरी कलहरू सुरक्षित गर्न?
रूसी चिया परम्परा को चिया अनिवार्य घटक लागि केक
पर्यटक "ईगल गरेको नेस्ट" जटिल, Altai विवरण
शीर्ष गर्न Stepping
को सार को उचित डिजाइन
मान्छे तपाईं रुचि वा तपाईं कसरी थाहा छ? सम्बन्धलाई कसरी सुरु गर्ने?
आफ्नो iPhone मा खेल स्थापना गर्न कसरी सिद्ध तरिका
Gantimurova Natalya Sergeevna: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन